Nhau - Chii Chinonzi Floor Socket?
Soketi yepasi (floor socket) iplug inogamuchira iyo inowanikwa pasi. Rudzi urwu rwesoketi inogona kugadzirwa kune akasiyana siyana maplugs, asi anonyanya kushandiswa kumagetsi, nhare, kana tambo yekubatanidza. Kushandiswa kwezvigadziko zvepasi kunodzorwa zvakanyanya nemakodhi ekuvaka munzvimbo dzakawanda.
Zvigadziko zvemagetsi kana maburi anowanzo kuwanikwa mumadziro.
Muzviitiko zvakawanda, magetsi uye mamwe marudzi ezvigadziko kana zvigadziro zvinowanikwa mumadziro kana mabhesi. Muimba yakajairika yekugara kana yekutengeserana, sockets akadaro anowanzo kuwanikwa chinhambwe chipfupi pamusoro peuriri uye anogona kuiswa pamusoro pematop top muzvimbuzi nemukicheni. Mukuvaka kwemaindasitiri kwakajairwa, nzvimbo zhinji dzakadai dzinoiswa mumadziro kana pamatanda ari pedyo nemichina. Mune zvimwe zviitiko, zvakadaro, socket yepasi inodiwa nekuti inodzivirira kumhanya kwetambo munzvimbo dzaanogona kuunza njodzi yerwendo.
Semuenzaniso, imba yekutandarira inogona kuumbwa nenzira yekuti masofa haagone kuiswa pamadziro pasina kuvhara kupinda mune mamwe makamuri. Kana muridzi wemba achida kuisa rambi rekuverenga kune imwe mugumo wesofa, anofanira kumhanyisa tambo pasi kuenda kumadziro emagetsi ari pedyo. Izvi zvinogona kunge zvisina kunaka. Zvinogonawo kuisa mungozi kuti chipfuwo kana kuti nhengo yemhuri ingagumburwa patambo, izvo zvinogona kukonzera kukuvara kumunhu ari kukugumbusa nerambi. Kuiswa kwesoketi yepasi pedyo nesofa kunopedza dambudziko iri.
Rutivi rwefiripi rwemari nderekuti mapulagi akaiswa muzvigadziko zvepasi zvisina kufanira anogona chaizvo kuve njodzi dzerwendo ivo pachavo. Izvi zvinonyanya kuitika mumaindasitiri uye zvivakwa zvekutengesa uko mutoro unogara uchinetseka. Floor sockets inofungidzirwawo nevakawanda kuisa njodzi huru yemoto kupfuura zvigadziko zvemadziro.
Kuisa nzvimbo dzepasi panguva yekuvaka kutsva kunogona kuve kwakaoma mune dzimwe nzvimbo dzepasi. Mitemo yekuvaka yakawanda inorambidza kuiswa kwepasi socket zvachose. Vamwe vanoraira kuti aiswe pauriri hwakaoma sematairi kana matanda chete kwete muuriri hwakapfava semakapeti. Vamwe vanobvumira nzvimbo dzepasi mukuvaka kwemaindasitiri asi kwete mukuvaka kwekugara kana kwekutengesa, nepo vamwe vachiraira zvakapesana.
Wiring kana kuisa socket yepasi muchivako chiripo chinogona kana kusabvumidzwa nekodhi. Kana zvirizvo, kodhi yacho ingangoda kuti basa riitwe neane rezinesi wemagetsi. Kana macode omunharaunda achibvumira kugadzwa kwezvigadziko zveuriri, muridzi wechivako anofanira kuyeuka kuti kuisa kwakadaro kungadhura kana kuti kusingabviri kana mugadziri wemagetsi asingakwanisi kupinda nechepasi peuriri, zvakadai sepauriri hwekongiri. Kana pasi iri pachikamu chechipiri, chikamu chesirin'i pazasi chingada kubviswa kuitira kuisa socket.
Nguva yekutumira: Aug-25-2020